Meksika: Lahatsary manao fanentanana manoloana ny fitomboan’ny fakàna an-keriny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Aogositra 2018 3:23 GMT
Nahitana fitomboan'ny fakàna an-keriny amin'ny tranga takalon'aina tao Meksika tamin'ity taona ity, ary vondrona bilaogera an-dahatsary no nanapa-kevitra hitsangana sy hanao horonantsary manolotra vahaolana.
Araka ny filazan'ny bilaogy Analisis a Fondo, sy araka ny nambaran'ny fikambanana tsy miankina Holandey, Pax Christi sy ny manampahefana ao an-toerana, nihoatra an'i Kolombia i Meksika amin'ny isan'ny fakàna an-keriny, izay mitranga matetika any an-drenivohitra sy ny faritra manodidina. Araka ny antontan'isa ofisialy, nisy fakana an-keriny 323 tao Mexico City tamin'ny tapaky ny taona 2008, ary mety hiakatra izany isa izany, satria matahotra ny hiantso polisy, izay fantatra fa voasaringotra tamin'ny resaka fakàna an-keriny taloha ireo fianakaviana niharam-boina.
Tao amin'ny Solution to Kidnapping in Mexico, manoro-hevitra ny olom-pirenena i bunnymango mba hitsahatra handoa hetra mandra-paharavonan'ny governemanta ny toe-draharaha fakàna an-keriny. Ny lahatsoratra amin'ny teny Espaniola ao amin'ny lahatsary dia milaza hoe:
Tao anatin'ny dimy volana voalohany tamin'ity taona ity, tranga fakàna an-keriny 232 mahery no nisy tao Meksika. Na izany aza, tsy azo antoka io isa io, maro no tsy voatatitra noho ny tsy fitokisana ny manampahefana. Amin'ny hetra aloantsika, mihazona ireo mpanao politika mpanao kolikoly sy mpamono olona ary ireo mpaka an-keriny any am-ponja isika. Adidin'ny governemantantsika ny manome rafitra fanabeazana, fiarovana ara-tsosialy ary fanohanana mba hisorohana ny heloka bevava ary hanomezana fahafahana ny olona. Andeha tsy handoa hetra intsony mandra-pivalin'izy ireo ny toe-draharaha ary hahitantsika vokatra. Raha tsy manana herimpo hitaky amin'ny manampahefana mba hanao zavatra isika, dia hiandry foana ary tsy hiova izany.
Ny fakàna an-keriny goavana farany dia ny nanjo ilay tovolahy 14 taona, Fernando Martí, izay manana fiaovana sy fotodrafitrasa ara-panatanjahatena ny rainy. Na dia efa nandoavana vola be takalonaina 500 000 USD aza, hita faty tanaty valizy tao anaty fiara nangalarina sy nilaozana ilay tovolahy. Ny nahatafintohina ny Meksikana dia ny hoe toa ireo mpiasam-panjakana ambony sy ny tompon'andraikitra ambony teo aloha no tompon'andraikitra tamin'ny fakàna an-keriny sy ny famonoana ilay zazalahy sy ny mpiambina azy anankiroa teo amin'ny toeram-pisavan'ny polisy sandoka nakana azy ireo.
Ao amin'ny El Justo Reclamo, Fernando Martí sy plebeyan blood, Martín Velez manoratra momba ny fomba toa mahatonga ny fampitam-baovao sy ny governemanta ho mody tsy mahita ny fanararaotan'ny polisy hatramin'izao, ary manome ny mety ho antony amin'izany:
Toa mitondra valiny ny famonoana an'i Fernando Martí: Niharatsy toy izany ny toe-draharaha ka na ireo sarangan'ny tompon'orinasa aza nanjary marefo, izany no nahatonga ity vono olona miavaka ity, na dia mampalahelo aza izany tahaka ireo roapolo hafa nitranga androany sy ny dimy amby roapolo rahampitso.
Ity lahatsary manaraka ity dia nataon'i Jocelyn Negrete, mivaky toy izao ny lahatsoratra:
Meksika no firenena Amerikana Latina ahitana risika avo indrindra amin'ny fakàna an-keriny. Meksika no toerana faharoa amin'ny isan'ny fakàna an-keriny. Fakàna an-keriny eo amin'ny 3 sy 4 no mitranga isan'andro ao amin'ny firenena. Indraindray mila zavatra hitranga isika vao afaka misaintsaina ny zava-misy iainantsika. Ny tena kinendrin'ireo mpaka an-keriny dia ireo mpandraharaha sy olona ao amin'ny saranga antonony. Tamin'ny taona 2007, 297 no fitambaran'ny fakàna an-keriny. Tsy tafavoaka velona tamin'ny fakàna an-keriny ny ankamaroan'ireo niharam-boina. Mijaly ny fanararaotana ara-batana na ny fanapahana ny ampahany amin'ny vatany ireo lasibatra. Tahotra, ny fijalian'ny fianakaviana, ny fanaintainana, ny alahelo, ny ratra ara-tsaina … no sasany amin'ireo voka-dratsy amin'ny maha-lasibatry ny fakàna an-keriny. AZA MANGINA !! Andeha hitaky ny fanavaozana ny mpitandro ny filaminana satria ny polisy ihany no mahavanon-doza amin'ny ankamaroan'ny tranga. Andeha hiara-hiasa ny tsirairay. Andeha hiady mba hanamafy ny birao misahana ny fiarovam-bahoaka. Rehefa miaraka isika, dia afaka manatanteraka fiovana lehibe. Hoavy tsara kokoa!